Xiddig ka tirsan Chelsea oo iska diiday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona – Gool FM
Messi oo kusoo laabtay tababarka buuxa ee PSG kahor kulanka Champions League ee Man City & Xiddig u ciyaara kooxda Ingiriiska ah oo u kulul inuu wajaho laacibkii hore ee Barca
Labo xiddig oo muhiim u ah Barcelona oo kusoo laabtay tababarka kahor ciyaarta Champions League ee toddobaadkan
Erling Haaland oo magacaabay toddobo weeraryahan oo ka wanaagsan isaga… (Mbappe iyo Messi oo ka maqan & Werner oo ku jira)
“Man United kuma guuleysan karto Premier League xitaa iyadoo heysata Cristiano Ronaldo” – Xiddig hore ugu soo ciyaaray Red Devils
Difaaca PSG ee Achraf Hakimi oo shaaciyay dabeecadda uu la yaabay ee uu leeyahay Lionel Messi
Xiddiga reer Real Madrid ee Toni Kroos oo sheegay inta bilood ee uu ciyaarayay isagoo dhaawac qaba
Wargeys kasoo baxa Spain oo daaha ka rogay xaalad shaki gelinaysa mustaqbalka Memphis Depay ee naadiga Barcelona
Macallinka Juventus ee Max Allegri oo xaqiijiyay inay dhaawacyo soo gaareen Dybala iyo Morata… (Miyey seegayaan kulanka Chelsea?)
Arsenal oo Cashar u dhigtay kooxda Tottenham oo marti ugu ahayd garoonka Emirates… +SAWIRRO
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Levante… +SAWIRRO
Xiddig ka tirsan Chelsea oo iska diiday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
Dajiye January 28, 2021
(Yurub) 28 Jan 2021. Wargeysyada Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xiddiga reer Spain iyo kooxda Chelsea ee Marcos Alonso, uu go’aansaday inuu la sii joogo Blues oo uusan ka tagin muddada soo socota.
Marcos Alonso ayaa ku dhibtooday kooxda Chelsea mudadii uu joogay tababarihii hore ee Frank Lampard, waxaana adeegiisa lala xiriirinayay kooxaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain iyadoo aanan wax heshiis iibin ah sameynin Barcelona inaysan wax ciyaaryahan ah la gali karin wada hadal, marka laga reebo xiisadda doorashada iyo maqnaanshaha guddiga maamulka kooxda.
Dhanka kale, imaatinka Thomas Tuchel ee kooxda Chelsea, ayaa waxay ka dhigeysaa fursadaha uu heli karo Marcos Alonso inay markale noqdaan kuwo fiican, si uu ula ciyaaro kooxda.
Waxaa lagu soo waramayaa in Alonso uu qirtay sanado ka hor in riyadiisa ay aheyd inuu u ciyaaro Real Madrid, wuxuuna u dheelay kaliya hal kulan bilowgii xirfadiisa kooxda Los Blancos, hadda 30 jirkan ayaan ku laaban doonin La Liga i uu ugu ciyaaro labadan kooxood.
Muxuu ka yiri Ole Gunnar Solskjær guuldarradii niyadjabka aheyd oo ay kooxdiisa Man United kala kulantay Sheffield United??
Rio Ferdinand oo weerar culus ku qaaday xiddigaha Man United, kaddib guuldarradii Sheffield United